सगरमाथाको उचाइ घट्यो कि बढ्यो ? पुससम्ममा मापनको काम सकिने - OpticalKhabar
होमपेज मुख्य समाचार सगरमाथाको उचाइ घट्यो कि बढ्यो ? पुससम्ममा मापनको काम सकिने
सगरमाथाको उचाइ घट्यो कि बढ्यो ? पुससम्ममा मापनको काम सकिने
DoroNepal.com 12:09 PM मुख्य समाचार,
काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ मापनको फिल्ड वर्कको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नापी विभागका चिफ सर्भे अफिसर तथा सगरमाथाको मापन कार्यमा संयोजक रहेका सुशील डंगोलले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, ‘‘अहिले केही मानिसहरु फिल्ड वर्कको काममा हुनुहुन्छ । मौसम खराब भएकाले उहाँहरुलाई काम गर्न केही अप्ठेरो भएको छ तर उहाँले काम सकेर फर्किएपछि संकलित तथ्यांकको प्रोसेसिङ्गको काम शुरु हुनेछ ।’’
उनका अनुसार प्रोसेसिङ्गको काम सकिएपछि ५–६ महिनासम्ममा सगरमाथा मापनको काम पूरा हुनेछ । उनले भने,‘‘हाम्रो लक्ष्य आगामी पुस महिना भित्रमा सगरमाथाको वास्तविक उचाई सार्वजनिक गर्ने हो ।’’
उनले हालै फिल्ड वर्ककै सिलसिलामा नापिकै दुईजना प्राविधिक खिमलाल गौतम र रबीन कार्की सगरमाथाको शिखरमा पुगेर फर्किएको जनाए ।
नेपालको गौरवको रुपमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाई आठ हजार आठ सय ४८ मिटर अहिलेसम्म मानिँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा भएका भौगर्भिक गतिविधिले गर्दा यसको उचाइ घटेको हुनुपर्ने अनुमान एकातिर भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यसको उचाइ बढेको अनुमान गर्ने पनि छन् ।
तर, नेपाली प्राविधिक टोलीको अध्ययनपछि वास्तविकता के हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनेछ । नापी विभागका अनुभवी इन्जिनियरहरुको टोली मापनको कार्यमा सक्रियताका साथ लागिरहेको छ ।
मापन कार्यमा संलग्नहरुका अनुसार अघिल्लो वर्ष नै लेभलिङ्गको काम सकिएको छ भने यसपालि ग्राभिटी मोनुमेन्टको काम गरिएको हो । डंगोलका अनुसार नापीका विभिन्न प्राविधिकहरु अहिले सोलुखुम्बु र संखुवासभाका क्षेत्रमा खटिइरहेका छन् ।
सगरमाथाको उचाइ मापनका लागि छिमेकी भारतका तर्फबाट पनि इच्छा देखाइएकोमा नेपाल आफैंले काम अघि बढाएको हो ।
सन् १९५५ मा सर्भे अफ इण्डियाले सगरमाथाको मापन गरेर अहिले मानिँदै आएको उचाइ पत्ता लगाएको हो । २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पपछि यसको उचाइमा असर गर्‍यो कि भन्ने अनुमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न पक्षले लगाउँदै आएका थिए । यसअघि चीनका तर्फबाट गरिएको एक अध्ययनमा सगरमाथाको उचाइ घटेर आठ हजार आठ सय ४४ मिटर भएको बताइएको थियो भने नेसनल जोग्राफिकले गरेको अध्ययनमा यसको उचाइ बढेर आठहजार आठ सय ५० मिटर भएको बताइएको थियो ।
सर जर्ज एभरेष्ट भारतको सर्भेयर जनरल हुँदा सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको हो । पहिला शिखरको उचाइबाट जमिनमा बन्ने कोणको आधारमा मापन गर्ने गरिएकोमा पछिल्ला समयमा सर्भेयरहरुले ग्लोबल पोजिसनिन सिस्टम (जीपीएस)को आधारमा शिखरको मापन गर्ने गरेका छन् ।
Posted by DoroNepal.com at 12:09 PM